Mbola niaritra tapak’andro hafa koa rehefa tonga teny amin’ny barazin’ny fahasalamana izay afaka niainga ihany. Nitaraina ihany ny mpandeha tamin’ny lalam-pirenena faharoa izay nizotra any Toamasina satria mbola voatazona adim-pamataranandro maro teo amin’ny toerana antsoina hoe An-tsarimasina noho ny filaharan’ny olona hatao fitiliana hafanana.
AVOAHY I ARPHINE
Misesy ny fanambaràna izay mitaky ny hamoahana tsy misy hatak’andro an’i Arphine Rahelisoa, mpanao gazetin’ny Ny Valosoa. Taorian’ny fikambanan’ny mpanao gazety miteny frantsay na UPF dia nivoaka tamin’ny fahanginany koa ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety na AFJ ary nilaza ny tokony hamotsorana ny mpiray fikambanana amin’izy ireo dia i Arphine izany. Indrindra koa ao anatin’ny fotoanan’ny andro sarotra lalovan’ny firenena izao ka tsy vahaolana ny fanagadràna mpanao gazety.
BAIKO MIDINA FOTSINY
Anio no ho fantatra na hahazo fahafahana vonjimaika na kosa mitohy hotazomina am-ponja i Arphine Rahelisoa. Handinika ny fangatahana fahafahana izay nataon’ny mpisolovava Willy Razafinjatovo dit Olala ny fitsaràna misahana izany. Raha tsiahivina dia nilaza ny Me Olala fa tena nivaona tanteraka ny fitsaràna ity mpanao gazety ity ary lasa baiko midina fotsiny no notanterahin’ny fampanoavana satria ny fanjakana no nitory ary tsy fantatra mazava hoe iza ilay olona tao ambadik’izany, tao anatin’ny fitoriana.
EFA NAHAVOA NY GIDRO KOA ?
Ahiana ho efa niparitaka amin’ny gidro ao amin’ny valan-javaboahary ao Vakoana-Andasibe ny coronavirus. Ny anton’izany dia voamarina fa nandalo tao ny mpizaha tany Italiana iray izay nitondra io tsimokaretina io. Manahy mafy arak’izany ny manam-pahaizana amin’ny fiainan’ny biby fa mety efa nisy fifampikasohana tamin’ny olombelona ireo gidro ireo, avy amin’ny mpizaha tany. Tena mifindra tanteraka amin’ny biby toa ny ragidro sy ny rajako tokoa mantsy ity covid-19 ity.
TSY MAHAZO MANEHO HEVITRA
Misy ny « circulaire » izay miparitaka eny anivon’ny mpiasam-panjakana izay miasa eny anivon’ny minisitera samihafa, mampitandrina momba ny fanehoan-kevitra amin’ny facebook. Mizotra tanteraka any amin’ny jadona ny fitondràna ankehitriny ary ny fahalalahana fototra no fehezin’ny fanjakana. Araraotina ny « réquisition » izay manome fahefana feno ny filoha mba entina hanatontosana an’izany. Sarotra anefa ny hamehezana ny olona satria filàna amin’ny fiainana ny fanehoan-kevitra.
MIHAINO NY MPANOHITRA IHANY KAY
Azo lazaina fa mihaino ny tsikera ataon'ny mpanohitra ihany ny governemanta. Rehefa nanakiana mafy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, momba ilay ministry ny fahasalamana izay tsy mba re feo mihitsy dia nivoaka ihany ity farany omaly ary niezaka nanazava momba ireo tarehimariky ny Covid-19, amin’ny maha-tompon’andraikitra voalohan’ny fahasalamam-bahoaka azy. Na dia lazaina fa mpanenjika any afara hatrany aza dia tsy afa-miala izy ireo noho ny hamafisan’ny mpanohitra 6 %.
Betsaka ny filoham-pokontany izay lasa ratsy endrika eo amin’ny fiaraha-monina noho ny feo mandeha. Misy ny milaza fa izay namany ihany, amin’ireo beantitra, no omena ireo fanampiana avy amin’ny fanjakana. Misy arak’izany no mimenomenona ary saika isaky ny fokontany izany. Nisy mihitsy aza ny filoham-pokontany sasany no nandrasan’ny olona teo ivelan’ny biraony noho ny resaka mandeha fotsiny.